Sakafo pronokal | Nutri Diet
PaÃ¼ Heidemeyer | | fahasalamana
Araky ny fantatrao, misy sakafo maro eny an-tsenaTsy ny rehetra no mahasoa na mahasalama ny vatana, maro no mampanantena ny hihena haingana fa lafo be tokoa.
Androany dia hiresaka momba ny sakafo Pronokal isika. Azo antoka fa efa naheno an'izany ianao, hiresaka momba izay misy azy isika, ny fomba fanaovana azy ary ny zavatra maharatsy azy.
1 Fomba pronokal
2 Ohatra amin'ny sakafo pronokal
3 Ny fatiantoka amin'ny sakafo Pronokal
3.1 Mety hiteraka soritr'aretina sasany izany:
4 Ny vidin'ny sakafo Pronokal
5 Mampihena lanja amin'ny fomba mahasalama
Raha ny fisian'ity sakafo ity dia tsy ny sakafo ihany io fa ny fomba iray manontolo izay misy ifandraisany amin'ny fomba fiainana. Tsy sakafo fahagagana io, fa programa iray natokana manokana ho an'ny olona manaraka azy hanary ny lanjany tadiaviny.
Ny sakafo Pronokal Izy io dia atao amin'ny alàlan'ny fikororohana izay manolo ny sakafo lehibe indrindra amin'ny androny, na dia avela handany legioma sy voankazo nifanaraka tamin'ny programa aza izy io.
Raha resaka sakafo mifototra amin'ny fihovotrovotraIlaina tokoa ny mihinana vitamina, mineraly ary omega 3 ao anaty kapsily mba hahazoan'ny vatana ny otrikaina ilaina rehetra mandritra ny fizotrany rehetra izay maharitra ny fihenan'ny lanja.
Izy io dia sakafo manome vokatra be, fa izay vonona hanaraka azy kosa tsy maintsy manao sorona sasany, satria ny olombelona tsy zatra mihinana fihomehezana fotsiny, na dia mahavoky azy ireo aza, noho izany, raha tianao ny hanao an'io sakafo io na karazan-tsakafo mifototra amin'ny fikororohana, mandeha ny herintsika.
Azo antoka ny fihenan-danja, Ialana ny karbohidraty sy ny menaka, noho izany ny vatantsika dia hampiasa ireo siramamy sy tavy miangona ao amin'ny vatantsika ho an'ny angovo ary hihena ny tahiry.
Ohatra amin'ny sakafo pronokal
Manaraka izany dia lazainay aminao hoe hanao ahoana ny fanarahana ny sakafo Pronokal, amin'izay ianao afaka manapa-kevitra samirery raha te hanomboka na hanao zavatra mitovy amin'izany.
Tany am-piandohana dia nalaina izy ireo Vokatra pronokal 5 isan'andro.
dia hidina hanana shakes 4 ary hanampy hena na trondro na atody roa izahay, hampitomboana ny fihinanana proteinina.
Ny dingana fahatelo, dia horaisina 3 mihozongozona isan'andro. Ny sakafo lehibe indrindra dia hifantoka amin'ny fakana proteinina hahavoky ny vatana. Hena fotsy, trondro na atody.
Tamin'ny dingana farany, Sakafo toy ny ronono, voankazo, legioma ary ny sisa amin'ireo vondrona sakafo no hampidirina ao. Mba tsy hiditra amin'ny mode ketose ny vatana ary tsy ho sitrana izay very.
Ny fatiantoka amin'ny sakafo Pronokal
Na dia eo amin'ny dingana farany aza dia manomboka mampiditra sakafo izahay hisorohana ny fiakaran'ny herisetra mahatsiravina, iray amin'ireo fahavalony lehibe indrindra dia ny fiatraikany yo-yo amin'ity sakafo ity.
Ny fihinanana proteinina betsaka, raha tsy miaraka aminy dia misy gliosida ny vatantsika dia manomboka ny fizotran'ny ketosis nefa tsy tadiavintsika izany. Terena ny vatana hametahana ireo tahiry matavy ireo mba hahazoana angovo, na izany aza, amin'ny tsy fahazoana ny siramamy avy amin'ny gliosida na gliosida dia hampitombo ny vatana ny pH ao anatiny izay mahatonga ny fanamasinana azy, hahatonga ny vatana tsy ho salama.
Mety hiteraka soritr'aretina sasany izany:
Maka fanafody, toy ny ibuprofen.
Kombo ny hozatra.
Tsy fahampian'ny angovo.
Fampidinana ny fiarovana.
Ity sakafo ity dia misy koa ao amin'ny fandaharanasany ny fihenan'ny lanja Hatao tsy mila manao karazana fanatanjahan-tena izanyNoho izany, raha vantany vao vita ny programa ary afa-po amin'ny lanjanao, rehefa miverina misakafo "ara-dalàna" ianao dia hanomboka hanarina ilay very ilay vatana.
Noho izany, ny filamatra dia ny mihinana sakafo voalanjalanja, ny sakafo mediteraneana dia manana ny toetra rehetra tokony hananana sakafo ara-pahasalamana. Ary koa, mba hahazoana fanatanjahan-tena indraindray, avy amin'ny mandeha, mihazakazaka, bisikileta na milomano.
Ny vidin'ny sakafo Pronokal
Iray amin'ireo "olana" lehibe indrindra amin'ity sakafo manokana ity ny vidiny lafo. Ho fanampin'izay, rehefa mandeha ny fotoana, dia nipoitra teny an-tsena ny fikororohana an'ity karazana ity miaraka amin'ny fananana sy firafitra mitovy aminy nefa latsaky ny antsasaky ny vidiny.
Vata iray an'ny Pronokal, manana vidiny 19 € raha ampitahaina amin'ny azy ireo mpifaninana izay angatahin'izy ireo 7 € eo ho eo. Izany dia mahatonga ny mpanjifa liana amin'ny fanatanterahana ny sakafon'ny Pronokal, hanana ny fampahalalana rehetra hahafahana misafidy amin'ny iray na amin'ny iray hafa, na amin'ny teny hafa, ny antony tokony hisafidianan'izy ireo ny Pronokal amin'ireo safidy sisa eny an-tsena.
Satria amin'ny tranga Pronokal dia amin'ny alàlan'ny mpaninjara voamarina ihany no ahazoantsika mividy azy.
Mampihena lanja amin'ny fomba mahasalama
Raha te hanomboka ity karazan-tsakafo ity ianao dia mankanesa any amin'ny mpitsabo ankapobeny na mpahay sakafo hanoro anao anao ny mahatsara sy maharatsy izay ho tojo anao. Hiankina amin'ny isan'ny kilao tadiavinao ho very koa izany, satria ny matavy amin'ny ambaratonga 1 dia tsy mitovy amin'ny dingana 2, na ny hatavezin'ny aretina.
Tsy mila mametraka risika ny fahasalamantsika isika, mihinana sakafo voalanjalanja sy mahasalama, tokony hihinana amin'ny vondrona sakafo rehetra ianao fa amin'ny habetsahana kely kokoa. Tokony mampihatra aretim-po ka ny avo kokoa ny fandaniana angovo ary ataovy izay hahatsapanao tsara ny tenanao.
Tsy misy fisakafoanana mahagaga, ary ity karazan-tsakafo ity dia afaka manampy anao hamoy kilao sasany fa tsy maharitra. Noho izany, manoro hevitra anao izahay mankany amin'ny manam-pahaizana manokana ianao mba hanananao fifehezana tena tsara mandritra ny dingana fampihenana anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Sakafo pronokal